अन्तिम समयमा बजारमा पहिरो, अबको टेवा कति ? - नेपालबहस
अन्तिम समयमा बजारमा पहिरो, अबको टेवा कति ?
९ माघ, काठमाडाैं । १ बजेर ३० मिनेटबाट बिक्रीकर्ता हावी हुँदा बजारले आज राम्रो प्रवृत्ति बनाउन सकेन । १ बजेर ३० मिनेटबाट घट्न थालेको बजार अन्तिम समयसम्म नै घट्यो । साताको अन्तिम कारोवार दिन नेप्से परिसूचक १५ दशमलव ९५ अंकले घट्दै १२९७ दशमवल ४७ को विन्दुमा बन्द भएको छ । शेयरबजार आज १३०० को मनोवैज्ञानिक टेवा मुनी बन्द भएको हाे ।
दोश्रो बजार परिसूचकमा १ दशमलव २१ प्रतिशतको गिरावट देखिएको छ । बजारमा दिन भरिमा १ अर्ब ३८ करोड बराबरको शेयर खरिदबिक्री भएको छ । आज १७२ कम्पनीका ३७ लाख ५४ हजार कित्ता शेयर खरिदबिक्री भएका छन् ।
बजारलाई ड्राईभ गर्ने वाणिज्य बैंकको उपसुचकमा आएको सर्वाधिक १ दशमलव ८३ प्रतिशतको गिरावटको कारणले गर्दा आज समस्त नेप्से परिसूचकलाई नै असर पुगेको छ । आज अन्य र जीवन बीमा उपसुचकमा वृद्धि देखिएको छ ।
आज बजार १३१४ दशमलव १७ को विन्दुमा खुलेकोमा ११ बजेर २४ मिनेटमा १३२० दशमलव ७७ को उच्च विन्दुसम्म पुगेको थियो त्यस्तै बजारले अन्तिम समयमा अर्थात २ बजेर ५८ मिनेटमा १२९५ दशमलव २९को न्युन विन्दु समातेको थियो । यस्तो खालको प्रवृत्तिलाई ईण्ट्राडे लो भनिन्छ, जसलाई अर्को दिनको लागि सकारात्मक प्रवृत्ति मानिदैन ।
हेरौं सर्वाधिक कारोवार हुने , कमाउने र गुमाउने ५ कम्पनी :
मुख्य प्रतिरोध : १३१० पहिलो टेवा : १२८५
हाल बजारले १३५९ को उच्च बिन्दु बनाएपछि बजार घट्दो प्रवृत्तिमा रहेको छ । आज नेप्से परिसूचक १२९७ दशमलब ४७ को बिन्दुमा बन्द भएको छ ।
आज पनि नेप्सेले “वियरिस” मैनबत्तीको चित्र बनाएको छ । यसले आज बजारमा विक्रीकर्ताको चाप रहेको जनाउँदछ ।
दैनिकी अवधिमा “आरएसआई” ६७ दशमलब १८ को बिन्दुमा छ । आरएसआईको प्रवृत्तिले बजार अझ केहि सच्चिन सक्ने जानकारी गराएको छ ।
“एडिएक्स” तथा जोड र बिजोड “डाइरेक्सनल इन्डेक्स”हरुले क्रेताको चाप कमजोर हुन थालेको जानकारी गराएको छ ।
नेप्सेको प्रवृत्ति र “अन ब्यालेन्स भल्यूम” ले विक्रेताको चाप हुने सम्भावना समर्थन गरेको छ ।
नेप्से बढेमा पहिलो प्रतिरोध १३१० को क्षेत्रमा पाउने देखिन्छ र घटेमा पहिलो टेवा १२८५ को क्षेत्रमा पाउने देखिन्छ ।
अघिल्लो लेखदीपक मनाङे पक्राउ
अर्को लेखडिसहोमद्वारा बिद्यार्थीहरुका लागि विशेष च्यानल ‘रिम्स’ को प्रसारण शुरु
व्यावसायिक रुपमा फस्टाएको अल्लो
शेयर कारोवार नयाँ इतिहास : आठ अर्ब ६९ करोडको कारोवार
लघुवित्त र बीमाका लगानीकर्ता मालामाल हुँदा वाणिज्य बैंक बढ्न नसक्नुको यस्तो छ कारण, हेरौ आजको बजार बिश्लेषण
दोश्रो बजारमा आज नाफा बुक हुँदा दैनिक बजार बिश्लेषणले के देखाउँछ ?
बजारले प्रतिरोध क्षेत्रलाई तोड्न कुन कुराले रोकिरहेको छ ?
ईण्ट्राडे हाईमा बन्द भएको बजारमा खरिदकर्ता आक्रामक भएकै हुन त ?
दुई उपसमूहको शेयर ओरालो लाग्दा पनि नेप्सेमा २१ अङ्कको वृद्धि